Semrush dia manampy fitaovana handefasana ny tranokalanao sy hahitanao ny olan'ny HTTPS | Martech Zone
Semrush dia manampy fitaovana handefasana ny tranokalanao sy hahitana ny olan'ny HTTPS
Alarobia, Aprily 26, 2017 Alakamisy, Aprily 27, 2017 Douglas Karr
Raha toa ianao ka tsy maintsy nampiasa fitaovana mpanamboatra tranokala mba hanandramana sy hanara-maso ny sary vetaveta na hampiditra izany tsy azo antoka, fantatrao fa mahasosotra izany. Soa ho antsika, nisy fanavaozana mahafinaritra iray Semrushfeno Site audit - ny fanampiana an Fanamarinana HTTPS.
Azonao atao izao ny manao fizahana HTTPS lalina izay mandrakotra ny 100 isan-jaton'ny tolo-kevitry ny fiarovana an'i Google.
Fa maninona no manan-danja tokoa ny HTTPS?
Ny fifindrana avy amin'ny HTTP mankany amin'ny HTTPS dia tsy mahafinaritra fotsiny ny fananana fa tena ilaina izany. HTTPS dia ampiharina mba hiarovana ny tsiambaratelo sy ny tsy fivadihan'ny angona ifanakalozana eo anelanelan'ny tranokalanao sy ny tranokala: cookies, fidirana ary teny miafina, antsipirian'ny kara-banky, sns. Ireo mpitsidika anao dia ho tia anao bebe kokoa raha manana HTTPS ianao, satria hahatsapa ho azo antoka kokoa izy ireo amin'ny fidirana amin'ny data ao amin'ny tranonkalanao.
Maninona no mila manara-maso ny HTTPS
Ny fizotry ny fifindra-monina avy amin'ny HTTP mankany amin'ny HTTPS dia dia somary mikitoantoana, ary raha tsy mampihatra tsara ny HTTPS ianao dia ho very maina ny ezaka rehetra ataonao mba ho lasa andriamanitry ny filaminana. Ny lesoka mahazatra indrindra dia misy ny toy ny:
Taratasy fanamarinana lany daty
Fanamarinana voasoratra anarana amin'ny anaran'ny tranonkala tsy marina
Fanohanana ny anaran'ny mpizara tsy hita (SNI)
Singa fiarovana mifangaro.
Tsy toy ny fanamarinana fampiharana HTTPS efa misy, Semrush milaza aminao marina ny toerana sy ny karazana lesoka nataonao ary ny fomba fanamboarana azy. Ny Site Audit HTTPS Checker dia manana interface interface-friendly miaraka amin'ny maso rehetra aseho amin'ny fomba miharihary. Ny tsara indrindra, ny fanamarinana dia natsangana tamin'ny Tolo-kevitry ny fampiharana HTTPS an'i Google.
Fampahalalana: mpiara-miasa aminay i Semrush
Tags: hadisoan'ny mpitety tranonkalany httpshttps checkermandady httpshttps errormifangaro votoatypejy tsy azo antokapejysemrushfanaraha-maso ny tranokala
Maninona no ilaina ny fitaovana fiaraha-miasa matotra mba handrosoan'ny ekipanao
Inona avy ireo mpivarotra afaka mianatra amin'ny fikarohana momba ny fanovana IT an'ny Dell?